Ogaden News Agency (ONA) – Bandhig-Faneedkii Hidaha iyo Dhaqanka Bariga Afrika ee Jaaliyadda Norway
Bandhig-Faneedkii Hidaha iyo Dhaqanka Bariga Afrika ee Jaaliyadda Norway
Posted by ONA Admin	/ August 3, 2014
Waxaa shalay oo taariikhdu ahayd 02.08.2014 lagu qabtay caasimada wadanka Norway ee Oslo Bandhigii hidaha & dhaqanka ee sanad kasta jaaliyada soomaalida ogaadeenya qaban jirtay.
Bandhig-faneedkan oo la dhaho festivalka Bariga Afrika waxaa wadajir u qabta jaaliyada S.Ogaadeenya ee Norway,iyada oo kusoo bandhigtay hidaha & dhaqanka faca Weyn ee bulshada Soomaalida Ogaadeenya gaar ahaan Xaga Fanka & Suugaanta.
Bandhig-Faneedka ayaa wuxuu bilowday 14:30 duhurnimo wuxuuna Dhamaaday 20:00 fiidnimo, dadka iyagoo raba inuu sii socdo ayaa waxaa loo sheegay inuu wakhtigii dhamaaday. Waxaa Kasoo qaybgalay boqolaal qof oo isugu jiray Soomaalida dagan Norway & qowmiyadaha kala duwan ee kunool caasimada Norway ee Oslo.
Bandhiga waxaa marti sharaf u ahaa Abwaanka wadaniga ah ee maxamuud Cumar jaangow oo aad dadku u jeclaysteen dhaantooyinkiisa wadaniga & jacaylkaba isugu jiray, waxaa kale oo marti sharaf ahaa gabdhaha wadaniyiinta ah ee Xaliimo Gobaad & Shukri Ilays oo kaalin aan la ilaaweyn ka qaatay festivalka.
Waxaa kale oo festivalka kaalin Weyn ka qaatay Xuseen Nuuriyoow oo ah fanaan dhalinyaro ah oo caan ka ah Norway & Cabdifataax Raasto oo ah isku xidhaha bulshada Soomaaliyeed ee Norwey khaasatan arimaha Bandhigyada & Dhaqanka.
Festivalkii jaaliyada Ogaadeenya ee Norway ayaa wuxuu kusoo Dhamaaday guul aad U Weyn, waxaana laga gaadhay ujeedadiisii oo ahayd In caalamka la baro bulshada dulman & dhaqankooda horseedka ah ee soomaaliyeed.